Sidee ayay duulimaadyada u saamayneysaa hakinta diyaaradda Boeing 737 Max? - BBC News Somali
Sidee ayay duulimaadyada u saamayneysaa hakinta diyaaradda Boeing 737 Max?
Image caption Boeing's 737 Max
Hakinta diyaaradda Boeing's 737 Max ayaa haatan la filayaa in ay sababto dhibaato dhanka duulimaadka ah.
Diyaaradda Boeing's 737 Max ayaa la hakiyay duulimaadyadeedi caalaamka kadib markii ay dhawaan burburtay diyaaddii Itoobiyaan Airline ee ay sameeysay Boeing.
Diyaaradda 737 Max ayaa loogu talagay duulimaadyada dhaw-dhaw ee dunida dacalladeeda.
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in saameynta markii hore ay keentay halkinta diyaaradda 737 Max ay u muuqatay mid cayiman, balse waxaa suura gal ah in saameynta ay sii badato haddii aanan muddo dheer loo ogolaanin in ay duulimaad sameeyso.
Sidee ayaa dunida looga yaqanay 737 Max?
Mareykanka oo difaacay badqabka diyaaradda Boeing 737 Max 8
Itoobiya oo go'aan adag iska taagtay diyaaradda Boeing 737 Max 8
Waa kuwee waddamada hawadooda ka mamnuucay diyaaradda Boeing 737?
Diyaaradda 737 Max ayaa waxa ay ahayd diyaaraddii loogu iibsiga badnaa shirkadda Boeing. Waxaa la iibiyay in ka badan 4,500 diyaaradood, kuwaasi oo ay iibsadeen ilaa 100 shirkadood.
Balse haatan diyaaraddan ayaa haatan sameeysay duulimaadyo aad u yar tan iyo intii la hakiyay.
Waa kuwee gobollada ay saameeynta ugu badan ku yeelaneeyso diyaaradda la hakiyay?
Dadka waxa falanqeeya ayaa sheegaya in waqooyiga America uu wajihi doono saameeynta ugu badan, sababtoo shirkadaha ka hawl-gala waxaa ka mid ah Air Canada iyo American Airlines, kuwaasi oo inta badan isticmaala diyaaradda 737 Max.
Sidaa darteed diyaaradahaan la hakiyay ayaa waxa ay hor-seedeeysaa in duulimaadyo badan la joohiyo taasi oo shirkadahada diyaaradaha ku khasbi doonto in ay rakaabka diyaradahaasi ay geeyaan albeergooyin ay degaan kadibna ay diyaarado kale saaraan.
Maxaa xigi doona hakintan?
Saameeynta ay yeelanayso hakintaan waxa ay ku xiran tahay muddada duulimaadyada laga mamnuuco diyaaradda 737 Max.
Taasina waxa ay ku xirantahay muddada ay qaadato baaritaanada sabata keentay shilkii diyaaradda ee Itoobiyan Airlines ee Axaaddii dhacay.